Gbasie faịlụ patent ịnabata Bitcoin maka igbe - Blockchain News
Global mbupu ibu gbasie na-na-achọ na-anabata Bitcoin site na otu ihe-mgbanwe mkpuchi ọrụ, ọhụrụ e bipụtara patent filings egosi.
Gbasie na-eyeing a usoro nke mkpuchi mmiri na ike digital forms nke ịkwụ ụgwọ, dị ka ihe ngwa tọhapụrụ site U.S. Patent na Trademark Office (USPTO) on Thursday. Ke adianade ọdịnala na ugwo usoro, na patent ịgba akwụkwọ depụtara Bitcoin dị ka a ga-ekwe omume ego iji kwụọ ụgwọ na.
Ịgba akwụkwọ obụk ụzọ dị iche iche site na renters nwere ike ịkwụ ụgwọ maka mkpuchi, kpọmkwem na-ekwu:
"Na atụ embodiments, mkpuchi akụ nwere ike na-agụnye a na-ekwu-of-ire (naa) usoro maka ịnakwere ugwo site na ọrụ na ụdị: … Bitcoin; na / ma ọ bụ (5) ọ bụla ọzọ kwesịrị ekwesị ụdị nke ịkwụ ụgwọ. "
na 2017, karịrị 20 patent filings tọhapụrụ site USPTO kwuru Bitcoin dị ka a ga-ekwe omume ugwo usoro. Ezie na ọnụ ọgụgụ ama esịn ubé site 2016, karịrị 50 patent filings wepụtara site na gị n'ụlọnga ke akpatre afọ abụọ na-egosipụta nke a akara eche echiche.
Gịnị na-maka Bitcoin Price?
Bitcoin na ndị ọzọ si ...
South Korea si regulator kọrọ iwu 12 cryptocurrency mgbanwe idegharị ahịa contracts
South Korea si corpor ...
Amazon meriwo a kutu ...
Previous Post:MasterCard si CFO: Cryptocurrency ịzụrụ na-boosting anyị ahịa emefu
Next Post:Blockchain Observatory na Forum-eweta EU na "ebute ụzọ" nke Blockchain Tech